बाबुराम भट्टराई भन्छन 'ओली सुध्रन्छन् र गोरु ब्या उँ;छ भन्‍नु उस्तै-उस्तै
बाबुराम भट्टराई भन्छन ‘ओली सुध्रन्छन् र गोरु ब्या उँ;छ भन्‍नु उस्तै-उस्तै
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुध्रन्छन् र गोरु ब्या उँ;छ भन्‍नु उस्तै उस्तै भएको बताउनुभएको छ ।
डा भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई ब्यंग्य गर्दै ओली सुध्रन्छन् र गोरू ब्या उँ;छ भनेर आश गर्नु उस्तै उस्तै हैन र ? भन्दै व्यंग्यात्मक प्रश्न गर्नुभएको हो ।
उहाँलेले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा सत्तरी आसपासका बुढाहरूको जत्ति पनि सत्य र न्यायको परख र दूरदृष्टि तथा विद्रोही चेतरआँट नभएको टिप्णी गर्नुभएको छ ।
डा भट्टराईले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ– ‘हामी सत्तरी आसपासका बुढाहरूको जत्तिपनि सत्य र न्यायको परख र दूरदृष्टि तथा विद्रोही चेत/आँट नभएका दोश्रो पुस्ताका नेताहरूलाई के भन्ने होला खै ! बाघ बुढो र स्याल तन्नेरी भन्दा चित्त दुख्ला ! ओली सुध्रन्छन् र गोरू ब्या उॅ;छ भनेर आश गर्नु उस्तै उस्तै हैन र ? चुनावचिन्ह नै पार्टी हो र ? खै चेत ?’
वामदेव गौतम एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित- अहिले ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ ।
बैठकमा माधवकुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्दा साथ नदिएका एमालेका १० स्थायी समिति सदस्यहरु पनि उपस्थित रहेका छन् ।तर, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अनुपस्थित रहेका छन् ।नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्दा उतै प्रवेश गरेको भनिएका गौतमले पछि एमालेमै रहेको सूचना सार्वजनिक गराएका थिए ।
दुई भागमा विभाजित हुँदै आएको एमालेबाट नेपाल समूह अलग्गिएर नयाँ दल दर्ता गरिसकेको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले दल सनाखतका लागि बोलाएको छ भने नेपाल समूह हाल चन्द्रागिरीस्थित चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा छलफलमा रहेका छन् ।